Tafiditra Anaty Tantara Ratsy Saro-bahana Ny Mpiandraikitra Ny Zon’ny Ankizy Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Tafiditra Anaty Tantara Ratsy Saro-bahana Ny Mpiandraikitra Ny Zon'ny Ankizy Ao Rosia
Voadika ny 02 Jolay 2016 9:20 GMT
Ny hadalana farany nataon'i Pavel Astakhov. Sary namboarin'i Kevin Rothrock.
Tamin'ny 18 Jolay, nivadika ho loza ny fitsangatsanganana tamin'ny fahavaratra raha tratran'ny oram-baratra ny vondron'ankizy sy mpampianatra nitaingina sambo tao amin'ny lasim-pahavaratra ao amin'ny faritra Karelia ao Rosia. Ankizy efatra ambin'ny folo no maty vokatr'izany, ary marobe ireo fanadihadiana notontosaina tamin'ireo talen'ny toby, izay voampanga ho manaiky fitsangatsanganana na dia efa fantatra aza ny faharatsian'ny toetr'andro, sy noho ny fanitsakitsahana fepetram-piarovana maromaro. Ho setrin'ny loza, nitarika fanadihadiana manokana i Pavel Astakhov, mpiandraikitra ny zon'ny ankizy ao Rosia. Nihaona tamin'ireo sisa tsy maty izy ary nanomboka ny resaka tamin'ny teny manitsinitsy ratsy laza ankehitriny: “Nanao ahoana ny filomanosana?”
Nitarika tabataba teo amin'ny aterineto Rosiana ny fihetsika tsy miraharaha nataon'i Astakhov. Vantany vao taorian'ny fitsidihany tsy nahomby nataony, nisy ny fanangonan-tsona tao amin'ny Change.org mitaky ny fametraham-pialàn'i Astakhov. Milaza ny fanangonan-tsonia fa tsy mendrika olona miandraikitra ny zon'ny ankizy ny teniny. Tsy izao no voalohan-javatra mampiady hevitra momba an'i Astakhov amin'ny teniny sy ny toerany amin'ny maha-mpiandraikitra azy. Tamin'ny 2015, raha nanambady lehilahy 57 taona ny tovovavy Chechen 17 taona, nilaza i Astakhov fa matotra aloha kokoa ny vehivavy ao Kaokazia, ary maro ny lalàna ao amin'ny faritra mamela ny ankizy tsy ampy taona hanambady.
Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, nahazo sonia maherin'ny 153.000 ny fanangonan-tsonia. Nahatonga an'i Astakhov hanontany ny maha-ara-dalàna ny fanangonan-tsonia izany. Amin'ny fijeriny, tranonkala Amerikana ny Change.org izay tsy tokony ampiasaina hanehoana hevitra ara-tsosialy Rosiana. Fanampin'izany, nihaika aza izy raha mitsidika ity tranonkala ity mihitsy ny Rosiana, manondro ny isan'ireo Okrainiana marobe voalaza fa mandoto rano azy ao amin'ny Instagram, nilaza izy fa miseho ho Rosiana izy ireo. Ho setrin'izany, nijery tombana ny tahiriny ny Change.org ary nahita fa olom-pirenena Rosiana ny 95 isan-jato mahery tamin'ireo olona nanao sonia, miaraka amin'ny Okrainiana izay tsy ampy atsasaky ny iray isanjato.
Toa notohanana tany ambadimbadika tany, niezaka nanazava ny fanontaniany tamin'ireo ankizy i Astakhov izay nolazainy fa ezaka hahazoana vaovao manan-danja ho amin'ny fanadihadiana, ary noraisina ho tsy mifanaraka amin'ny zavamisy ny teniny. Andro vitsivitsy taty aoriana, nanoratra tao amin'ny Twitter izy fa nandefa ireo sisa tsy maty 33 mba hiala-sasatra maimaimpoana any amin'ny Ranomasina Mainty ny ben'ny tanànan'i Moskoa. Mailaka avy hatrany ireo mpaneho hevitra namaly, nanontany ny hevitra fandefasana ireo sisa velona tamin'ny loza an-tsambo any amin'ny rano hafa indray.
Na niezaka niaro-tena tamin'ny filazana fialan-tsasatra i Astakhov na tsia, toa hita fa mety niharan'ny fanerena mafy izy ary nanaiky ny fialàny. Raha nandà haneho hevitra momba ny resaka miely ny biraon'i Astakhov, nilaza ny sekreteran'ny gazetin'i Kremlin fa tsy nandre momba ny fametraham-pialana izy, nilaza kosa ny masoivohom-baovao RBC fa niresaka loharanom-baovao roa tao Kremlin izy izay manamafy fa hametra-pialàna amin'ny asany i Astakhov, raha vao tafaverina aorian'ny fialan-tsasatra (Voalaza fa nandeha vakansy tany Monte Carlo i Astakhov amin'izao fotoana izao.)
Angamba namehy izany tsara kokoa ny vaovaom-piarahamonina manesoeso “Lentach”, miaraka amin'ny sary noforoniny teo no ho eo taorian'ny tatitry ny fialàn'ny. Mamadika ny resaka nifanaovan'i Astakhov tamin'ireo sisa velona tamin'ny loza an-tsambo ny sary, mampiseho ny iray amin'ireo tovovavy manontany azy hoe, “Manao ahoana ny asa?”
Павел Астахов написал заявление об отставке, сообщает РБКhttps://t.co/3cS1e3U5lK pic.twitter.com/cjbDPzodGU
— Лентач (@oldLentach) June 30, 2016
Nanolotra ny fametraham-pialàny i Pavel Astakhov, hoy ny tatitry ny RBC.